शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२० श्रावण २०७७, मंगलवार १४:०६ English
शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौँ, २४ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क लिएर कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्रेस ब्रिफिङमा केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले स्थानीय तहहरूलाई शुल्क माग गरेको खबर आएको भन्दै त्यसो गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन् ।
कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण सरकारी खर्चमा भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले गराएको परीक्षणको शुल्क माग गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन् ।
हाल काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा सरकारी अस्पताललाई मात्र शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने सुविधा छ । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा स्वेच्छाले शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गराउन सकिने छ । मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
सरकारले लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने जनाएपछि यी मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
२४ असार २०७७, बुधबार १९:०० मा प्रकाशित